Private Jet Aircraft Charter Flight N'ihi 2018 FIFA World Cup na Russia
AKWỤKWỌ pụrụ iche kacha ikuku mgbagharị ụgbọelu mgbazinye ọrụ n'ihi na onye ma ọ bụ azụmahịa njem ịga bọl ikpeazụ na Russia World Cup football egwuregwu. Flights a ọdụ na-ama oversubscribed ma ị ka nwere ike n'akwụkwọ a onwe ugboelu ịga ọkụ
The FIFA World Cup bụ nọmba otu egwuregwu omume na ụwa. M na-ekwu okwu ihe omume, ma, ọ bụ ihe ekwesighi nke kasị njọ ụdị. The World Cup bụ extravaganza nke kacha otosịrị iru,na onye ọ bụla bụ na e nwere na-enwe oge nke ha ndụ. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị na-adịghị aghọta na mgbe ihe omume onwe ya bụ ihe na-eju njem e nwere ihe ọzọ kpamkpam ka atụmatụ maka.
E wezụga eziokwu na ị ga-abịa, nke bụ na ọ dịghị onye si mmasị ihe na-eme, ị na-enwe ime nhọrọ nke ihe na-eme maka njem. Ọ bụrụ na, site ohere, na-akwọ ụgbọala na-otu nhọrọ n'ihi na ị ahụ na bụ nsogbu nke ya onwe ya. N'ihi na ndị na-efe efe bụ ezie na ndị ọzọ nsogbu abuana. Ihe dị ka ebe na-etinye na ụgbọ ala mgbe na n'ọdụ ụgbọ, otú ezi bụ ọrụ na ụgbọelu na-aga ịbụ, otú jam-juru n'ọnụ na ọdụ ụgbọelu na-,na ịgbaziri a ụgbọ ala mgbe unu bịarutere.
Inweta a FIFA World Cup Private Jet Aircraft Charter Flight Service na World Cup mgbakwasị bụ otu n'ime ụzọ kacha mma ịga n'ihi na ọ eliminates ndị niile nsogbu. Ị ala ụgbọ ala gị na onwe warara na-ahapụ ya ruo mgbe ị laghachiri. The ọrụ dị ukwuu n'ihi na ọ bụ naanị gị nchebe na-eje ozi. Ịkwụ ụgwọ ụlọ a ụgbọ ala a na-emekarị ka unu site na mgbe wiil emetụ n'ala nke airstrip.
ndị a, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ ihe mere, bụ ihe mere ị ga-ahọrọ iji ofufe a onwe irenti ugboelu na FIFA World Cup. The isi ọwụwa na-adịghị oké ọnụ ahịa ya obibi. Aga World Cup na-a mgbe a na ndụ ahụmahụ ọtụtụ ndị, na a ga-echeta maka a ndụ na-abịa. Ekwela ka ebe nchekwa na-nke hassle na si ịgbaziri a ụgbọala ma ọ bụ a egwu ụgbọ elu. Were a onwe ụgbọ elu na bụ nchegbu na hassle free.
Private ugboelu ọdụ ụgbọelu na Moscow
Moscow Vnukovo bụ ndị kasị ewu ewu onwe ugboelu ọdụ Moscow, dị 30km n'ebe ndịda-n'ebe ọdịda anyanwụ obodo center. Ya runway nwere ike ijikwa onwe ugboelu ugbo elu nke ọ bụla size na o nwere 24-hour FBO ụlọ ọrụ maka oji ugboelu ahịa na-arụ ọrụ.
Ọzọ ọdụ nhọrọ Moscow bụ Moscow Domodedovo, Moscow Sheremetyevo na Moscow Ramenskoye.
Charter a onwe ugboelu na Russia 2018 FIFA World Cup venues obodo map
A ngụkọta nke 12 venues gafee Russia ga-nọrọ n'ụlọ fixtures maka 2018 FIFA World Cup. Ke adianade stadiums na Moscow na St Petersburg ndị a bụ:
Kendall Ma Kylie Jenner enwetaghị A Private Jet Iji Las Vegas